Mucaaradka: “yaan laga aargoosan ciidamadii diiday mudda kordhinta” | Saxil News Network
Mucaaradka: “yaan laga aargoosan ciidamadii diiday mudda kordhinta”
Golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay soo dhaweeyeen go’aankii dib uga labashada mudda kordhintii loo sameeyay madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
Bayaan ay soo saareen midowga Musharaxiinta ayaa waxaa sidoo kale ay soo dhaweyeen go’aanka ah in rai’sul wasaare Rooble uu si buuxda ula wareego maamulka doorashada iyo amniga. Waxay ka digeen in ciidamadii ka soo horjeeday mudda kororsiga laga “aargoosto” ama la dhibaateeyo.
Waxay sidoo kale ku baaqeen in ciidamadaasi ka soo horjeeday muddo kordhinta “aan la duudsiin xaqooda”.
Daahir Maxamuud Geele oo ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa BBC u sheegay in ay diyaar u yihiin dib u mideynta ciidamada qaranka.
“Anagu waxaan doonaynaa in maanta laga gudbo oo barito loo gudbo oo aan aragno ciidankeeni oo mideysan oo aan lahayn aargoosi oo aan lahayn dhibaateyn” ayuu yiri Mr Geele.
Mr Geele ayaa intaa ku daray in marnaba aysan rabin in ciidanka qaranka uu kala qeybsamo.
“Ma rabno in ciidan qaran kala qeybsamo oo uu kala jabo, waxaan rabnaa in ciidamada ay isku soo noqdaan, dastuurka si waafaqsan ay isugu soo noqdaan, hanaanka ciidamada si waafaqsan ay isugu soo noqdaan ayaan rabnaa”, ayuu intaa ku daray.
Rai’sul wasaaraha ayay ugu baaqeen in uu qaado tallaabooyiin muujinaya in uu u madaxbanaan yahay amniga dalka islamarkana uu kasbado kalsoonida ciidamada.
Midowga musharaxiinta ayaa waxay dhanka kale hoosta ka xariiqiin in wixii 1 bishan May ka dambeeya rai’sul wasaare Rooble iyo xukuumadiisa lagula xisaabtami doono masuuliyadda doorashooyiinka iyo amniga dalka.
Maxaa u qabsoomay, maxaa se u qabsoomi waayay Farmaajo?
Golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku booriyeen rai’sul wasaaraha in uu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha doorashooyinka islamarkana uusan dhinac-na uusan u xaglin.
Qoraalka sawirka,Madaxda dowladda fedaraalka iyo kuwa dowlad goboleedyada
Suurgal ma tahay in la heshiiyo oo doorasho la qabto?
Khilaafka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya muddo ayuu taagnaa iyadoo shirar badana dhinacaydu ka yeesheen balse lagu heshiin waayay hannaanka doorashada wuxuuna ismari-waagu keenay in beesha caalamku ay caddaadis saarto madaxda Soomaalida, maadamaa muddo xileedkii madaxweynaha uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkan.
Dadka arrimahaan sida dhow ula socda ayaa qaba in cadaadiska hadda saaran madaxda dolwadda federaalka, mamaul goballeedyada iyo mucaaradka uu khasbayo in aaney furneyn wadda kale oo ah in doorasho la aado taasi oo saldhig u noqon karta xasilooni siyaasadeed oo dalka Somaaliya ka hirgasha.
“Cadaadiska saaran dhinacyada Soomaalida awgood suuragal ma ahan qorshe aan aheyn doorashadii lagu heshiiyay 17-kii September oo daraadeed looga soo noqday muddo korarsiga labada sano ahaa in la qabto waxaan aheyn ama la qaban waayo midna suurgal maaha” ayuu yiri Jibriil Cali Aw-Maxamed